Sida loo Cusbooneysiiyo Sidebar Dhacdooyinka WordPress ah ee laga helo iCal adoo adeegsanaya Kalandarka Google (iyo waxyaabaha kale ee Google Fun!) | Martech Zone
Arbaco, Juun 30, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan saxiixay degelkeyga shaqsiyeed Google Apps. Waxaan helay buur ka mid ah Spam tan iyo markii cinwaankayga iimaylka ah uusan isbadalin sanado iyo martigaliyahayga (in kastoo aan jeclahay iyaga) waxay ka qaadi doonaan $ 1.99 cinwaan kasta oo emayl ah Ilaalinta Spam, wax sidaas ah Gmail sameeyaa bilaash. Sidoo kale, Gmail, waxaad kula shaqeynaysaa algorithms ay dhisteen malaayiin isticmaaleyaal ah sidaa darteed waa sax!
Waxaa jiray faa iidooyin dheeri ah oo ku saabsan u guurista barnaamijyada Google ee aanan ka warqabin, in kastoo! Midka koowaad waa awoodda lagu mideyn karo barnaamijka farriinta degdegga ah ee Google, oo loo yaqaan 'Talk', si toos ahna dhinaceyga dhinaceeda iyadoo loo marayo a Google Talk Badge.
Sidoo kale, hadda waan helay Ogeysiiska Google, taas oo i ogeysiisa marka aan haysto emaylka iyo, laga bilaabo maanta, waxay ku milmeysaa barnaamijyada Google waxayna igu wargalisaa markaan qabto dhacdooyinka kalandarka sidoo kale. Waa codsi aad u fiican.
Kalandarka Google iCal Iswaafajinta
Waxaa laga yaabaa in wararkii ugu weynaa toddobaadkan ay ahaayeen markii saaxiibkay, Bill, uu soo dhigay wax ku saabsan taageerada Kalandarka Google ee CalDav iyo awoodda iswaafajinta iCal iyo Kalandarka Google. Way fududahay
Fur doorashooyinka ICal
Ku dar Koonto
Gali Cinwaankaaga Emailka iyo Furaha
Gali cinwaanka Jadwalkaaga:
Ma aanan dooneynin in aan ku wadaago jadwalkayga aasaasiga ah dhinaceyga WordPress, markaa waxaan ku daray Kalandar kale oo ku jira Kalandarka Google ka dibna ku dar iCal sidoo kale. Waxaa jira tilmaamaha isku xidhka kalandarkaaga sare iyo iCal. Si fudud waa URL ka duwan.
Kalandarka Google Isku-dhafka WordPress
Tallaabada ugu dambeysa waa in la rakibo Kalandarka Google WordPress Plugin inaad kudarid wijad dhinaceeda dhinac ah oo falanqeeya soona bandhiga dhacdooyinka kalandarkaaga. Waxaa jira waxyaabo yar yar oo leh qalabkan, in kastoo, ay tahay in fiiro gaar ah la siiyo:
Isku qor a Xogta Google API Furaha, waxaad ubaahan doontaa inaad gasho goobaha Plugin's.
Markaad gasho cinwaanka XML ee jadwalkaaga Jadwalka, hubi inaad ku beddesho noodhka ugu dambeeya url 'buuxa' si cinwaanku u egyahay sidan:
yourdomain% 40group.calendar.google.com / dadweyne / buuxa
Cinwaanka 'widget' looma soo bandhigin si waafaqsan WordPress API iyo shaqeynta aaladda widget. Qof ayaa kufiicnaa inuu ku dhajiyo sixitaanka tan Koodhka Google laakiin wali lama sii deyn. Waa kuwan tilmaamaha ku saabsan lambarka loo dirayo beddel si loo saxo arrimaha cinwaanka widget.
Iyada oo tan si buuxda la isugu dhafan yahay, waxaan hadda ka faa'iideysan karaa Google Notifier ama iCal oo waxaan ku dari karaa dhacdo ka soo muuqan doonta dhinaceyga dhinaceeda! Waqtiga ay qaadanayso waxay kuxirantahay goobaha iskudhafkaaga ee udhaxeeya iCal iyo Google.
Tags: kalandarkajadwalka googleiCalWordPress
Talooyin ku saabsan Kaararka Ganacsiga?
Tani way fiicneyd! Quudinta jadwalka taariikhda liiska dhacdooyinkeygu waa isku-darka ugu fiican ee barta PR-ga - http://www.indy-biz.com!
Mar labaad oo cadeynaya inaad tahay ninka u socda WordPress! Mahadsanid!
Feb 11, 2009 markay ahayd 11:53 PM
Taasi way fiicneyd. Isku dayay jadwal badan oo dhacdooyin ah, ma helin mid ku habboon. Qalabka Google wpng wuxuu ahaa mid ku habboon marka laga reebo qodobbada kor ku xusan. Iyo, aqoon durugsan uma lihi qoraalka. Sidaas…
Anigoo mahadnaq kuugu daraya boodhadhka kor ku xusan….
Tusaalooyinkaaga degdegga ah ee wax ku oolka ah waxay si aan caadi ahayn u caawiyeen maamule websaydh oo ka beddelaya html una beddelaya wordpress.